Tababarka Korantada - GO! SPECTRUM SCHOOL (7E SPECIALIZATION YEAR // FULL-TIME // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
spectrum School > koorsooyinka our > 7e sannadka khaaska ah > Awood-koronto
In 7e sannadka khaaska ah Awood-koronto (wakhti buuxa / BSO) waxaad baraneysaa inaad ogaato khaladaadka lagu ogaado kumbuyuutarada la xakameynayo shaxda elektarooniga ah ee gaariga. Waxaad sidoo kale baraneysaa farsamooyinka si aad u xalliso dhibaatooyinka ficilka. Waa mid aad u tababarka dhabta ah. Mashruucyada iyo layliyadaada waxaad ku hubineysaa in aad tahay dayactir wanaagsan oo dayactirid kasta.
Ma jeceshahay inaad fure u noqoto baabuurta? Miyaad jeceshahay gawaarida quruxda badan miyaad rabtaa inaad ogaato sida gaarigu u shaqeeyo? Miyaad dooneysaa inaad wax ka barato dhaqanka oo aadan u jilicsanayn shaqada jireed?
Waxaad gali kartaa 7 oo keliya sannadkii haddii aad heshay ugu yaraan shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Fikrad ahaan, waxaad hore u heshay tababarka garoonka beerka: Farsamoyaqaan auto of Qalabka Mechanics-ga Daryeelka. Waxaad ka heleysaa maadooyin guud oo kooban, laakiin aadan hoos u dhigin qaybta farsamada ee koorsada. Ka dib oo dhan, gawaarida casriga ah waxaa ka buuxa qalabka farsamada iyo teknoolajiyada cusub.
Haddii aad gudbisid koorsadan waxaad heli doontaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare oo aad tahay farsamayaqaan baabuur oo buuxa. Waxaad bilaabi kartaa dabaqa shaqada ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga. Waxaad sii wadan kartaa barashada. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa halkan.